Rasuul Bawlos wuxuu qoray: “Waxaa iskutallaabta laygula qodbay Masiixa, (Galatiya 2,20), laakiin Bawlos kaliya ma ahayn. Wuxuu ku yidhi Masiixa kale, ayuu ku yidhi Masiixiyiin kale (Kolosay 2,20). “Waa la inala aasay isaga,” ayuu warqad u qoray reer Rooma (Rooma 6,4). Maxaa ka socda halkan? Oo kulligood dadkan kuma wada joogin buuraha Yeruusaalem ku yaal. Muxuu Bawlos ka hadlayaa halkan? Masiixiyiinta oo dhan, ha ogaadeen ama ha ogaadeen, waxay wadaagaan iskutallaabta Masiixa.
Laakiin taasi maahan. Waxaan sidoo kale aqbalnaa - oo aan uga qayb qaadannaa - sarakicistiisa! «Ilaah baa innaga sara kiciyey» (Efesos 2,6). Waxaan halkaas joognay subaxii sarakicidda. «Ilaah baa kugu soo nooleeyay isaga» (Kolosay 2,13). «Waxaad ku soo kacday Masiixa» (Kolosay 3,1).
Ciise waxbadan buu qabtay oo kaliya inuu dhinto oo haddana soo sara kaco. Wuxuu ku noolaa nolol xaq ah oo annaguna nolosha ayaannu kula wadaagnaa. Dabcan annagu qummanaan kuma lihin - xitaa si tartiib tartiib ah ayaan ugu qumman nahay - laakiin waxaa naloogu yeedhay inaan la wadaagno nolosha cusub ee nolosha Masiixa. Bawlos wuxuu soo koobayaa goorta uu qorayo: "Sidaa darteed waxaa laylala aasay baabtiiska dhimashada dhexdeeda, si, sidii Masiixa kuwii dhintay loogaga sara kiciyey ammaanta Aabaha, innaguna waxaan ku socon karnaa nolol cusub." Waa lala aasay isaga, lana sara kiciyey, lana noolaaday.
Sidee ayay noloshaani cusub u ekaan doontaa? "Sidaas oo kale idinkuna isku tiriya inaad dembiga u dhimateen oo aad Ilaah ku tihiin Ciise Masiix. Sidaas daraaddeed dembigu yuusan idinku oggolaan jidhkaaga dhimanaya, oo doonistiisana ha addeecin. Sidoo kale, lugahaaga ha u dhiibin sidii xaqdarro oo kale, laakiin waxaad naftaada u dhiibtaa Ilaah sidii kuwo dhintay, oo haddana nool, gacmahaaguna Ilaah ha u noqdeen hubka xaqa ah (Aayadaha 11-13).
Haddii aan isla garanno Ciise Masiix, nolosheenna isagaa iska leh. «Waxaan ku qanacsanahay haddii mid u dhinto qof walba, dhammaantood inay dhinteen. Oo sidaasuu u dhintay dhammaan ayuu u dhintay, in kuwa halkaas degganu aanay sii noolaan doonin, laakiinse kuwa dhimanaya oo loo sara kiciyey iyaga, (2 Korintos 5,14: 15).
Bawlos wuxuu ku sharaxay ereyadan: "Waxaa iskutallaabta laygula qodbay Masiixa. Waan noolahay, laakiin imika ma ihi, laakiin Masiix ayaa igu dhex jira. Maxaa yeelay, waxaan haatan jidhka ku noolahay, waxaan ku noolahay aamin xagga Wiilka Ilaah, kan i jeclaaday oo naftiisa isu bixiyey (Galatiya 2,20).
Ciise xertiisii ​​ayuu weyddiiyey oo ku yidhi, Iskutallaabta kor saar, oo i soo raac. Aqoonso naftayda aniga. U oggolow noloshii hore in iskutallaabta lagu qodbo iyo nolosha cusub inay jidhkaaga ku xukumaan. Ha igu dhacdo aniga. Ii ogolow inaan kugu dhex noolaado waxaan ku siin doonaa nolosha weligeed ah. »
Haddii aan dhigno aqoonsigeenna Masiixa, waxaynu la joogi doonnaa silica iyo farxaddiisa.